बजारलाई टर्नओभरको साथ, तर दिगो नहुनसक्छ ! Bizshala -
बजारलाई टर्नओभरको साथ, तर दिगो नहुनसक्छ !
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १०.६३ अंकले घटे पनि कारोबार रकम भने बढेर निकै माथि पुुगेको छ । परिसूचक घटेर १२२०.४४ अंकमा सीमित बन्दा कारोबार रकम चाहि बढेर ४४ करोड माथि पुुगेको हो । यसले बजारलाई कारोबार रकमले केही साथ दिन थालेको हो कि भन्ने आशा बढाइदिएको छ । तर, कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचक पनि बढे मात्र आगामी दिनमा बजार बढोत्तरीको गतिमा कुद्ला भन्न सकिन्छ ।
बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने परिस्थितिहरुको विकास भइनसकेकोले बिनाकारण बजार बढेर धेरै माथि जाने अवस्था छैन । यसकारण बजार तत्काल बढिहाल्छ भनेर ठोकूवा गर्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन । बरु, निरन्तर घट्दो बजारले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको सहजै बुुझ्न सकिन्छ ।
बजार अनिश्चित बन्दै जाँदा पैसा भएका लगानीकर्ता समेत बैंकको मुद्धती खातामा पैसा राखेर लगानीको निश्चित रिटर्नका लागि निश्चिन्त हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । ऋण लिएर सेयर खरीद गरेका लगानीकर्ताहरुमा बैंकहरुको मार्जिन कलको त्रास, बजार बढ्ने आशामा ऋणको ब्याज दिंदै सेयर होल्ड गर्नेहरु समेत निराश भएर बिक्री गर्न थाल्दा केही दिनदेखि बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
सेय कारोबारमा करको प्रसंग, पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयन, बजारमा एनआरएनहरुको प्रवेश, मार्केट मेकरको व्यवस्था, बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स लगायतको बिषयहरु समेत लामो समयसम्म पनि प्रष्ट नहुँदा र धेरै बिषयमा अन्यौलको भूमरीमा पर्दा बजार निरन्तर घटिरहेको हो । बिहीबारको बजारलाई समेत यसकै निरन्तरताको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबारमा संकुचन आएका कारण सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.९९ अंकले घटेको छ । यस्तै, समग्र कारोबार मापक फ्लोट इण्डेक्स ०.६३ अंकले घटेको छ ।
यो दिन बजारका सबै समूहको सूचकमा रातो पोतिएको छ । बैंकिङ समूह ३.९६ अंकले घटेको छ भने बिमा, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र बित्त समूहमा क्रमशः १२०.७, १०.७९, १९.२५ र ०.८ अंकले घटेका छन् ।
होटल समूहमा ५९.४५, जलविद्युत समूह २५.२४, उत्पादनमूलक ३३.०६ र अन्य समूह ५.२७ अंकले घटेका छन् ।
यो दिन बजारमा १ सय ५८ कम्पनीका १० लाख ८८ हजार १ सय ५७ कित्ता सेयर ४४ करोड १६ लाख ४४ हजार ८ सय २६ रुपैयाँमा कारोबार भयो ।
यो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्रै ४ करोड ७१ लाख बढीको कारोबार गर्यो । नबील बैंकले १ करोड ९५ लाख, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड ८९ लाख, नेपाल बैंकले १ करोड ७९ लाख, सानिमा बैंकले १ करोड ७० लाख, सिद्धार्थ बैंकले १ करोड २७ लाख, चिलिमे हाइड्रोले १ करोड २५ लाख, ग्लोबल आइएमई बैंकले १ करोड २० लाख, एभरेष्ट बैंकले १ करोड २० लाख र राष्टिय बिमा कम्पनीले १ करोड ५ लाख बढीको सेयर कारोबार गरे ।
यो दिन नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै कमायो । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ८.१४ अंकले बढ्यो । यस्तै, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको मूल्य समेत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भयो ।
यो दिन प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयर ५.३३ प्रतिशतले घट्यो । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकका लगानीकर्ताले पनि ५.२६ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति गुमाए ।
nepal stock exchange nepse down
बिग मर्जर र बम्पर लाभांशको आँकलनमा वाणिज्य बैंकको सेयर
काठमाण्डौ । करेक्सनका कारण दुई दिनसम्म सुस्ताएको बजार बुधबार फेरि...
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकको सेयरमा फेरि पनि उच्च खरीद चाप...
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ बिहीबारसम्म भर्न पाइने !
काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओमा आवेदन...
रसुवागढी भन्दा साञ्जेनमा लगानीकर्ताको मरिहत्ते, कति आयो
काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओमा...
नेपाल एग्रो लघुवित्तको आइपीओमा ३२.५१ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको आइपीओमा...
गणपति माइक्रोफाइनान्समा थामिनसक्नु आवेदन, दोश्रो दिनसम्म
काठमाण्डौ । गणपति माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमीटेडको...
लगानीकर्ताका कारण पनि समस्या आएको भन्दै ‘मेरो सेयर’ चलाउन
काठमाण्डौ । हरिकुमार श्रेष्ठ विगत लामो समयदेखि सेयर बजारमा लगानी...
सुरु हुने भो खुल्लामुखी म्युचुअल फण्ड, एनआइबिएललाई स्वीकृति
काठमाण्डौ । नेपालमा पनि खुल्लामुखी म्युचुअल फण्ड संचालनमा आउने...